I-smartphone ye-Oppo ye-5G ifumene isatifikethi se-CE | I-Androidsis
U-Oppo ngoku ukulungele ukumilisela i-5G yokuqala ye-smartphone: ufumene isatifikethi se-CE
Ngaphambili, u-Oppo watyhila ukuba unqwenela ukuba yi-OEM yokuqala yase-China ukumilisela ifowuni ye-5G. Nangona uXiaomi sele eyiqalisile Mi Hlanganisa 3 5G, ifowuni ayikathengiswa okwangoku. Ke, umenzi usenokuba ngowokuqala ukuthengisa ifowuni yakhe ye-5G e-China.
Awukabikho umhla wokumiliselwa okwangoku, kodwa u-Oppo usandula ukubhengeza ukuba i-smartphone yayo yokuqala ye-5G iphumelele kuvavanyo lwe-5G ye-arhente yeenkonzo zovavanyo zamanye amazwe, i-Sporton International Inc.
ISporton yinkampani esekwe eTaiwan ikakhulu ebandakanyeka ekuboneleleni ngeenkonzo zovavanyo kunye nezatifikethi zonxibelelwano olungenazingcingo kunye neemveliso zonxibelelwano eziselfowuni. I-smartphone ifumene isatifikethi se-5G CE esikhutshwe yiarhente ye-CTC yaseJamani.
Ifowuni ka-Oppo ye-5G ifumana isiQinisekiso se-CTC kunye ne-CE
Ifowuni yokuqala ye-Oppo eqinisekisiweyo ye-5G yefowuni inezibonelelo zokuhamba rhoqo, iimowudi ezininzi kunye nokudityaniswa okuninzi njengoko kuchaziwe. Ifowuni ikwaxhasa ukudityaniswa okungaphezulu, njenge-5G n78 frequency band, ibhendi ebanzi kakhulu ekhoyo, kwaye inokugubungela ngokupheleleyo iinethiwekhi ze-2G, 3G, 4G. Yintoni egqithisile, ixhasa uluhlu olubanzi lwamazwe kunye nemimandla.
I-Bluetooth SIG iqinisekisa umahluko we5G weOppo Reno
Ukufumana isatifikethi se-CE kuthetha ukuba Iselfowuni i-Oppo 5G iyahambelana nemigangatho esekwe yi-European Union (EU), kubandakanya i-wireless, ukhuseleko, ukuhambelana kombane, impilo, phakathi kwezinye iinkalo. Oko kuthetha ukuba ifowuni izalisekisile iimeko eziyimfuneko zokungena kwintengiso yaseYurophu. Ke ngoko, u-Oppo unako kwaye uza kuyithengisa imveliso kwilizwekazi. Le iya kuba yi Oppo Reno.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » U-Oppo ngoku ukulungele ukumilisela i-5G yokuqala ye-smartphone: ufumene isatifikethi se-CE
Ungayijoyina njani inkqubo ye-beta yeeapps ze-Android
I-Galaxy A90 iya kuba sisikrini sokuqala se-Samsung yonke